Semalt Expert: Ahoana no Hanombanana ny SEO Performance?
Ny mpitantana ny e-varotra no manjavozavo. Mikaroka ao amin'ny Google foana izy ireoho an'ny zavatra iray mba hanehoana fa mihatsara kokoa ny toerana misy azy ireo. Rehefa hitany ny fiovana ao amin'ny valin'ny fikarohana, dia mihevitra izy ireo faNy fampihetseham-pandrenesana fandaharana (SEO) fandaharam-pikarohana fikarohana dia tsy misy dikany - caracteristicas de las camaras digitales profesionales. Mampalahelo fa tsy marina foana izany.
Frank Abagnale, mpitantana ny Success Successor Semalt Digital Services, dia manazava ny tena fototry ny vokatr'ilay tranonkala sy ny vokatra.
Fifaninanana: Inona koa no loka?
Amin'izao fotoana izao, ny fifaninanana dia nitombo ny tetikady fanao mahazatra fanao mahazatra ampiasainampifaninana. Ny tompon'ny orinasa e-commerce rehetra dia maniry ny hanalany ny vondron'olona mpandraharaha eo amin'ny sehatra mba hanatsarana ny fahitana, hahazoana tsindry ary hanamboatrafivarotana. Na izany aza, ny ankamaroan'ny fikarohana dia mametraka ireo singa ao amin'ny valin'ny fikarohana izay manala ny saina amin'ny vokatra mahazatra voajanahary sy manosikalisitry ny pejy.
Personalization: Iza no mipetraka?
Ankehitriny, ny fialan-tsasatra dia tena voafaritra tsara ka tsy misy intsony ny tsy fanananafandaharana ho an'ny ankamaroan'ny fikarohana. Amin'ny ankapobeny, ny fandaharana izay tsikaritry ny mpanjifa amin'ny findainy dia tsy hitovy amin'ny toerana hitanao eo amin'ny takelakao nasolosaina. Vokatr'izany, tsy misy olona afaka milaza amin'ny marina hoe "Laharam-pahamehana voalohany amin'ny Google izahay!"
Amin'ny ankapobeny, ny faktiora dia voafetra amin'ny alàlan'ny:
Location. Io no tena mahazatra indrindra izay mitarika ny fanarenana ny fizarana.Rehefa mamaritra ny toerana misy ny mpampiasa mampiasa ny cellule cellule na ny adiresy IP an'ny solosaina, dia manolotra valin'ny fikarohana manokana
Fampiasana fitaovana. Ny fampifanarahana izay miseho amin'ny smartphones dia tsy mitovy amin'ny hitaeo amin'ny birao na takelaka. Ny fitaovana finday matetika dia mifandray amin'ny apps. Vokatr'izany dia hahita toerana ambony kokoa ireo tranonkala ahitana traikefa an-kalamanjana..Raha aNy mpanjifa dia mitady zavatra ao amin'ny iPhone, ny vokatra dia tsy mitovy amin'ny zavatra hita eo amin'ny vokatra Desktop.
Tantaram-pikarohana. Isaky ny miditra ao amin'ny kaontin'ny motera fikarohana, ny milina fikarohanaAfaka mahazo ny tantaram-pikarohana rehetra ianao. Ohatra iray tonga lafatra ianao rehefa miditra ao amin'ny kaonty Gmail eo amin'ny solosainao ianao, ny milina fikarohana dia miditra aony kaonty Google anao sy ny fikarohana Google. Ity fampahalalana ity dia ampiasaina hanamboarana ny valin'ny fikarohana hita eo amin'ny fitaovana misy anao
Fitondran-tena ara-tsosialy. Amin'ny fampiasana sehatra toy ny Twitter sy Google+, Google dia mahazo fidirana tanterakaamin'ny fitondran-tenanao. Izany dia manazava ny antony amoahana votoaty maromaro na marika amin'ny valim-pikarohanao, saingy tsy miseho rehefa misy hafaNy olona dia manomboka karoka fitadiavana.
Ny Mponina. Ny fitaovam-pikarohana dia mametraka ny mpampiasa rehetra ho amin'ny vondrona demografika mampiasa ny azyny fitondran-tena taloha amin'ny fanolorana dokam-barotra be loatra.
Mifototra amin'ireo antony voalaza etsy ambony, azonao izao fa ny vokatra fikarohana dianamboarina. Ireo antony ireo dia manome ny mombamomba ny antony mahatonga ireo fitaovana fitaterana momba ny fananganana tahirin-tsolika mety hamerina ny mombamomba ny mpanjifa ho an'ny mpanjifa na dia eo aza ny isa misy anaofitaovana dia manondro fa ianao no laharam-pahamehana voalohany noho ny teny fototra manan-danja indrindra. Ny fahatsinjovana dia mety tsy hahita ny valiny mitovy amin'ny fiafaràny izay midika izanyTsy voatery hividy anao izy ireo. Midika izany fa raha misy fitaovana fitaterana lahatra dia tsy afaka manome ny angon-drakitra marina mba hanampy ny orinasanao hahazoana fidiram-bolaTsy fitaovana azo antoka izy io hanehoana ny fahaiza-manao.
Famolavolana: Inona no teny fanalahidy tokony hofidiana?
Ny fijerena fandaharana dia midika fa misafidy andian-teny sy teny fototra tianao tianaoMiantehitra ary manamboatra ny fahombiazan'ny toerana misy anao ho an'ny teny. Ny andian-teny nofidinao dia afaka manova ny endrik'izanyny vokatrao.
Ny ankamaroan'ny fotoana, ireo orinasa dia mahita mora kokoa amin'ny fampiasana andian-teny sy teny manan-danja efa anananyNy laharam-pahamehana amin'ny fampidirana ny marika na ny teny miaraka amin'ny fifaninanana ambany. Izany matetika no mahatonga azy ho toy ny hoe ny fahombiazan'ny SEO dia tsy misy dikany na diatsy.
Etsy andaniny, ny pejy tsirairay dia afaka mamaritra fehezan-teny an'arivony ary kely dia kelytinady. Mifototra amin'ny hevitra fonosin'ireo teny manan-danja maro izay maneho ny fitadiavana 1.5,15 na 60 isam-bolana izay samy manampy amin'ny fitaterana fifamoivoizana raha oharina amin'nyTeny manan-danja avo lenta izay arahanao ao amin'ny tatitra nataonao. Ny fijerena ireo teny fanalahidy izay heverinao ho avo lenta dia mamela anao ho jamba amin'ny mety hijanonaamin'ny fitadiavana lavaka lava.
Temporality: Oviana no niova?
Ny toeran'ny olona dia tena matevina sy ara-batana. Noho izany dia mety hitady ny tianao indrindra ianaofanalahidy ary mahatsapa fa tsy mamaritra ny laharana voalohany izy. Na izany aza dia mety hahagaga anao ny fahitanao azy io amin'ny voalohany amin'ny fikarohanao.